Linear Flow Ilaphu ziphatha - China Qingdao Aedis Ilaphu ziphatha
FlowCon diffusers emoyeni Jets air POWERFLOW enkulu zingasetyenziswa ezahlukahlukeneyo izicelo. Bona kakuhle kakhulu kwi entrapping nokuxuba umoya. Ukuphoswa elide Jets umoya ngempumelelo ekuhambiseni umoya ndinobushushu kwiindawo floor ezipholileyo. Ubunzima kunye uqina le Jets kunokubangela umoya ukujikeleza 10'-40 'ngaphaya diffuser. Ekubeni diffuser FlowCon POWERFLOW eqhagamshelwe iyunithi lomoya makeup, umoya engenayo nga kusasazeka ngokulinganayo ngaphezulu kwindawo lokuvelisa elikhulu. Ukugcina amandla, umoya okulala ingabhekiswa phezulu lokuzimanya ngomoya Isilingi lifudumele ebusika yaye emva koko usenokubhekiswa uyehla na uye pholisa iindawo umsebenzi ehlotyeni. A fan kunye diffusers FlowCon POWERFLOW awukwazi ingasetyenziswa ukuba avuthele umoya isilingi ngokufudumeleyo ezantsi lokuzimanya neqela ezipholileyo umoya floor. yokonga amandla mibi. Xa iimeko umsebenzi eshushu, elula ukujikeleza umoya ukuphucula imveliso. Ezinkulu Jets umoya POWERFLOW ukuba ikwindawo efaneleke ehamba diffuser ukuba pholisa izikhululo umsebenzi ngamnye. PowerFlow imigudu air ngelaphu akhulule evaporative iphela, umoya wehlela namazibuko amakhulu. PowerFlow Jets umoya aqala ku-1 "ukuya 6" ubukhulu. iingcebiso isicelo zibandakanya; mveliso, iindawo kubekwa, kunye necandelo lokuvelisa, ndawo zokwenza umthambo, Amadama, Retail, iivenkile sokudla, kunye nezakhiwo bethutyana.
10 oz. IVinyl Camera ipholiyestaUbushushu High Poly oku-ipholiyesta - elwa polyethylene
Cable Halo Ukumiswa HD Rail
Sokudla Stores NGOOJINGI Industrial Manufacturing Areas Amadama
Air Jet Imigudu Condensate idreyini Zoba Iintambo Ilaphu umatshini neZilinganisi End lwangaphakathi Cap
Uziphu kunye Velcro Connections
polyethylene eyomelela ukuba iikhemikhali ezininzi kwaye uya kuma phezulu emoyeni ndiyizalele ezininzi amasuntswana. Kuye lobushushu anyibilike ka-180 ° F kwaye icocwe yi umlomo umbhobho spray kunye ibrashi. Polyethylene yi nekudodobalisa umlilo kwaye uyakufezekisa ASTM E-84 Class 1, AC 167, LC 1005. Ingxelo ICC-ES: ESR-2646.
300 D ipholiyesta
ipholiyesta premium kwibakala ngelaphu camera. Kuye lobushushu anyibilike-350 ° F kwaye iyahlanjisiswa kumacandelo ezincinane. Ipholiyesta yi nekudodobalisa umlilo edibana ASTM E-84 Class 1, AC 167, LC 1005. Ingxelo ICC-ES: ESR-2646.
ipholiyesta premium grade Ilaphu uncoated kunye arhente elwa. Kuye lobushushu anyibilike-350 ° F kwaye iyahlanjisiswa kumacandelo ezincinane. Ipholiyesta na nekudodobalisa ngumlilo, edibana ASTM E-84 Iklasi 1 kwaye zihlelwa ul.
10 oz. IVinyl Camera ipholiyesta
IVinyl lilaphu camera eya kuma phezulu emoyeni ndiyizalele ezininzi amasuntswana. Kuye lobushushu anyibilike ka-180 ° F kwaye icocwe yi umlomo umbhobho spray kunye ibrashi. IVinyl yi nekudodobalisa umlilo kwaye uyakufezekisa ASTM E-84 Class 1.
XStatic yi ilaphu anti-ndawonye camera ukuba features i-arhente elwa. Kuye lobushushu anyibilike ka-250 ° F kwaye iyahlanjisiswa kumacandelo ezincinane. XStatic i nekudodobalisa umlilo kwaye uyakufezekisa ASTM E-84 Class 1.
Temp fiberglass High
Temp High Fibreglass lilaphu fiberglass camera ukuba features lobushushu anyibilike ka-500 ° F. Kananjalo kusetyenziselwa ezinye izicelo. Le fiberglass isale kwaye kunokuba Jets moya. Fiberglass Temp High na nekudodobalisa ngumlilo, edibana ASTM E-84 Iklasi 1 kwaye zihlelwa ul.
Ukungakhululeki cable yeyona ndlela kakhulu nenoqoqosho. Ifumaneka kuzo zonke ngobubanzi, Single intambo ukuya ku-30 ​​"ububanzi kabini ukuya ku-48" ububanzi ezintathu ngaphezu koko. Snaphooks ukuba zibekwe phezu kumaziko "36 nezifumaneka zeplastiki, steel stainless. Cable ifumaneka iqaqanjiswa, steel Stainless, kunye IVinyl camera. Le nkqubo iquka intambo (3/16 "ubukhulu), turnbuckle, kwensimbi kunye yamasango intambo.
b) Halo UkuNqunyanyiswa:
inkqubo entsha Tension ukunqunyanyiswa Halo (HTS) unika imbonakalo kwindlela diffuser FlowCon wakho ukuba olunyuswe ngokugqithisileyo xa inkqubo zezomoya icimile. Olu khetho ingasetyenziswa nge elula kumqolo omnye intambo ukunqunyanyiswa okanye kaloliwe HD olunye ukugcina diffuser FlowCon ubonakala olunyuswe ngaphandle komoya. Limited ukusuka 10 "ukuya 36" ububanzi, olu khetho ngogqibeleleyo ukuze izicelo apho elithotyiweyo diffuser ngesandla phantsi yingxaki. Amacandelo ngokulula kuthatyathwa phantsi ihlanjwe kungabikho yabasebenzi eyongezelelweyo. Amaqela aquka standard cable kumqolo omnye ungakhululekanga, okanye inkqubo yethu kaloliwe eyodwa HD.
New steel HD aluminiyam kaloliwe yinkqubo yethu premium kaloliwe. look onombala agudileyo kwinkqubo yethu FlowCon ngelaphu diffuser. Ifumaneka kuzo zonke ngobubanzi, kaloliwe omnye ukuya ku-30 ​​"ububanzi kabini ukuya ku-48" ububanzi ezintathu ngaphezu koko. Neziwuza ukuba zibekwe phezu kumaziko "36 nezifumaneka zeplastiki. Le nkqubo ibandakanya kaloliwe HD, isekela zoololiwe, couplers, kunye isekela nkqo (isantya links). Radius bend ziyafumaneka ukuhlangabezana engqinibeni radius.
Okulandelayo: Micro Flow Ilaphu ziphatha